kana iwe uchimhanyisa, iwe unogona kuwana yechipiri-gen amazon echo dot pane inouraya $ 20 mutengo
Kuru Nhau & Ongororo Kana iwe uchimhanyisa, iwe unogona kuwana yechipiri-gen Amazon Echo Dot pamhondi $ 20 mutengo
Zvese & ldquo; zvese-nyowani & rdquo; Echo Dot mutauri akangwara ari pano nezwi rine simba uye dhizaini inopokana, zvinoreva kuti nguva & rsquo; yekutenga iyo yapfuura modhi. Pakutanga yakaburitswa kumashure muna Gumiguru 2016, iyo inoderera yechipiri-gen chishandiso inowanzo ingori gumi madhora anodhura pane ayo akamutsiva.
Asi Amazon yakatopa iyo pane imwezve $ 10 dhisikaundi akati wandei, uye ikozvino Woot anotora dhiri racho kuenda padanho rinotevera nekuveura imwe $ 10. Izvi zvinoreva kuti iwe unofanirwa kubhadhara muyero $ 19.99 yeAmazon Echo Dot (2nd Chizvarwa) mune nhema kana chena nhasi chete, kunyangwe paine & rsquo; zviri pachena kubata.
Sezvazviri, iwe unofanirwa kugarisana nezvakagara zviripo-zvikamu mu & ldquo; zvakanaka & rdquo; mamiriro, kupa & ldquo; zvishoma zvipfeko zvekukanganisa. & rdquo; Woot anovimbisa ese aya anoshandiswa Echo Dots ari mu & ldquo; yakakwana yekushanda order & rdquo;, kutsigira iyo mhiko mhiko nezwi remazuva makumi mapfumbamwe warandi.
Iwe unogona zvechokwadi kuita zvakanyanya kutonyanya, uye ramba uchifunga mundangariro iyi e-tailer ndeye yakazara muridzi chikamu cheAmazon. Iwo madiki smart mutauri & rsquo; s vagadziri vari ivo chaivo vanobata iyo yekuchengetera, kurongedza, uye kutumira kweEcho Dots pane yakakosha kupihwa nhasi, zvakare ichifukidza yako yakajairwa dhirivhari yemitengo kana iwe & rsquo; re uri Prime nhengo.
Kana iwe usingazive & rsquo; hauzive chaizvo zvinoita Echo Dot, it & rsquo; s zvakangofanana zvakafanana neyakajairika-saizi Alexa smart mutauri, asi kana iwe uchida yemhando yepamusoro odhiyo, iwe ungangodaro uchifunga nezvekusiyana uchitenga mhando yepamusoro ( mbeveve) mutauri.
Zvikasadaro, mukomana akaipa uyu achapindura mibvunzo yako, seta maaramu uye maalarm, ridza mimhanzi kubva kuSpotify kana Pandora, kudzora zvishandiso zvemumba zvine hungwaru, uye kunyangwe kuita mafoni asina maoko Alexa & apos; s inoshamisa kugona uye kuita zvinhu zvakasiyana-siyana. Izvo & rsquo; s akawanda maficha emakumi makumi maviri emadhora, eh?
YouTube Music, YouTube Music Premium uye YouTube Premium zvinotanga kubuda nhasi
Iwe & apos; uchanzwa wakachengeteka zvakanyanya nezve Safari browser kana iwe ukaisa nhasi & apos; s iPhone uye iPad inogadziridza
Samsung Galaxy Tarisa Inoshanda 2 Ongororo
Inobatsira iOS 13 matipi uye manomano e iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max
Maitiro ekuvhura yako Apple iPhone 6s kana Apple iPhone 6s Plus kana yakatengwa kubva kuApple Chitoro